နှစ်ကူးမွေးနေ့ ခြစ်အူးဆွေးမြေ့ My Birthday | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » နှစ်ကူးမွေးနေ့ ခြစ်အူးဆွေးမြေ့ My Birthday	16
နှစ်ကူးမွေးနေ့ ခြစ်အူးဆွေးမြေ့ My Birthday
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 1, 2016 in My Dear Diary | 16 comments
ယခုလို နှစ်ဟောင်းကုန် နှစ်သစ်အခါသာမြ ကူးပြောင်းဂျိန် ပီးတော့ အနော့် မွေးနေ့နဲ့လဲ တိုက်ဆိုင်ချိန်မှာ ရွာဓါးမိတ်ဆွေမြှားထံမှ ခြစ်ဖွယ်ပီယဝါစာများ မြှောက်စားချီးမြှင့် ခံရလျင် အတိုင်းထက်အလွန် ဒဂွံနဲ့ကုတ်ကားပါပဲလို့……………
အခြစ်ငှက်နေတဲ့ Big Cat
alinsett says: စဉ်းစားလေ…. ဆုတောင်း
kai says: “ဂျလိ..ဂျလိစ်… ဂျလစ်… ဂျလစ်စ်…”
ムラカミ says: ဂွေးဇိ အနာပေါက်ပါဇီ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပိုးး သမျှ မီးးမ
ကြောင့် ကို ဘလော့ပါဇီ..
E-မြောက်မြောက် says: ကုတ်ကား မုတ်စား ဖုတ်ပြား အုတ်ကြား တုတ်ထွား ဂုတ်ကြား
Wow says: ဒီကြောင့်မွေးနေ့ကလဲ ခီနခီန
kai says: ဟိုဒင်း.. ဟိုဟာပြောရရင်.. Western Union ကြော်ငြာ ဒီနှစ်ကန်ထရိုက်မချုပ်တော့ဘူး..
အဲဒါ.. တခုခုများ ပြောပေးနိုင်သလားလို့…။
Wow says: ကျနော်မေးကြည့်ပေးမယ် ဒဂျီး…. ကျနော် WU အတွက်လုပ်မပေးတာတော့ကြာပြီ…. အောက်က လူတွေကိုလဲ မေးကြည့်လို့ရတယ်.. ကျနော်နဲ့ ဆက်သွယ်ရတာတော့ သူတို့ပဲ… XXXXXXXXXX
kai says: Indo-china အတွက် Philippine team က ဒီနှစ်တာဝန်ယူတယ်တဲ့…။
မင်း ခန့် ကျော် says: ၂ဟောင်းပြောင်းရွေ့ လပ်ဂေါင်းးးး
၂ သစ် ထဲ ဝင်းရွေ့ လပ်ဂေါင်းးး
ဆိတ်သစ် လူသစ် ဖြစ်ရွေ့ လပ်ဂေါင်းးး
မွေးနေ့ရှင်ဂြီးးး ကျမ်းမာရွေ့ လပ်ဂေါင်းးး
လိုအင် ဆန်တ များပြည့်စေရွေ့ လပ်ဂေါင်းးး
ဟက်ပီးးး ရွေ့ လပ်ဂေါင်းးးးးး
ဘက်ဒေးး ဟူရွေ့ လပ်ဂေါင်းးး
Mike says: .နှစ်ကူးမွေးနေ့
အောင် မိုးသူ says: အချစ်ငတ် ဘစ်ကတ်
King says: ညောင် ညောင် ညောင်
ဂွီးးးးးး ခီးးးးးးးး ခွီးးးးးးးးးးးးးးးး
ကြောင်ဘာသာဖြင့် ချီးမြှင့်ပေးလိုက်သည် …
kai says: ပလုံ…ပလန်… သရဲ…သရဲ…
တနှစ်တခါပေါ်လို့လာ.. မောင်ရင်မောင်ကင်း.. ပျင်းတင်းတင်း.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1383
King says: Heee
Online ပြန်သုံးတော့ ပြန်ရောက်လာပြန်ရော :D
CharTooLan says: ဘာတွေလံကြုတ်နေလဲမတိ